အဝတ်အစား Tag ကို, စတစ်ကာ / ဆန့်ကျင်အတုတံဆိပ်တပ်ရန် RFID အဝတ်စက္ကူ Tag ကို, RFID Clothes Paper Tag, RFID Clothing Security Paper Tag, RFID Garments Paper Tag
RFID Clothes Tag is high performance UHF RFID Tag, used in the clothing of anti-counterfeiting and fast management. Use PVC or paper for compound, comply with ISO18000-6C protocol with RFID chip embedded. Long read distance of5မီတာ, multiple tags identify technology and anti-fake features make it an powerful media for brand apparel.
အတိုင်းအတာ: 80mmX50mmX0.4mm သို့မဟုတ်သတ်မှတ်
ပစ္စည်း: စက္ကူသို့မဟုတ် PVC ပစ္စည်း
ပုံနှိပ်ခြင်း: CMYK4အရောင်ပုံနှိပ်ခြင်း
personalization: ဘားကုဒ်, QR ကုဒ်ကို, အမှတ်စဉ်နံပါတ်, ရွှေ / ငွေနောက်ခံ, ပူပြင်းစိုင်း, ခရမ်းလွန်။.
အဖုံး: 200 PC များ / သေတ္တာ, 10သေတ္တာ / စက္ဏူထူ, 6ကီလိုဂရမ် / စက္ဏူထူ
chip: NXP UCODE G2XM / G2IL, h3, Impinj Monza 4E / 4D / 4QT, Monza 5, စသည်တို့ကို.
အကွာအဝေးကိုဖတ်ပါ: အထိ 10 မီတာ
လုံခွုံရေး: TIME က, စကားဝှက်ကို, EAS / afi ( သာ G2XM chip ကို)
anti-တိုက်မှု: အကွိမျမြားစှာ tags များစစ်ဆင်ရေးထောက်ခံ
3: D အင်တင်နာ: မျက်စိကန်းသောအစက်အပြောက်မရှိဘဲ Omni directional antenna ( သာ M4 / M5 chip ကို)
operating: -25℃ ~ + 70 ℃, 5~ 95% RH အ, အဘယ်သူမျှမငွေ့ရည်ဖွဲ့
ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းဘဝ:525 ℃အောက်မှာတစ်နှစ်
လြှောကျလှာ: brand clothing security identification, brand clothing production supply chain management, clothing retail security anti thief management.
I am interested in your product RFID Apparels Paper Tag, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF အဝတ်အစားလုံခြုံရေးစက္ကူ Tag ကို
prev: RFID အီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်တွေ, E-လက်မှတ်
နောက်တစ်ခု: လှိုင်းနှုန်းသည် UHF ပျက်စီးလွယ်ကာကွယ်ဆေးဖွိုစတစ်ကာ, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF ပျက်စီးလွယ်ကာကွယ်ဆေးဖွိုတံဆိပ်တပ်ရန်, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF ပျက်စီးလွယ်ကာကွယ်ဆေးတည်ဆောက်မှုစတစ်ကာ